- တစ်စုံတစ်ခုကို အန္တရာယ်မကျရောက်စေဖို့ အပေါ်ကနေ အကာအရံ ကာပေးထားတဲ့စိတ်။ နောက်တစ်မျိုးက အထဲက အနှစ် မပါဘဲ အပေါ်ယံလေးမှာပဲ အကာရှိနေတဲ့စိတ်။
- စိတ်ဆိုတဲ့အရာကိုက အပြောင်းအလဲတွေ၊ အရွှေ့အပြောင်းတွေနဲ့ အဆက်မပြတ် တရစပ်ဖြစ်နေရတဲ့ သဘာဝ သဘောတရား ဖြစ်နေလို့ပဲ။
- မိမိစိတ်က မိမိသိကြည့်နေတဲ့ နေရာမှာရှိရဲ့လား? မိမိရဲ့စိတ်က ၀င်လာသမျှ အာရုံတွေအပေါ်မှာ ဘယ်လိုနှလုံးသွင်းနေလဲ? ဒါမှမဟုတ် ခံစားနေသလား? မိမိစိတ်ကို မိမိအသိဉာဏ်နဲ့ စောင့်ကြည့်ပြီး လေ့လာခြင်း၊ သုံးသပ်ခြင်း၊ လိုအပ်သလို ပြုပြင်ပေးခြင်း စတဲ့ စိတ်အလုပ် လုပ်နေတဲ့ စိတ်အနေအထား။
- မိမိစိတ်ကို မိမိကိုယ်တိုင် အကဲဖြတ်တာ မကျွမ်းကျင်ဘူးဆိုရင် မိမိစိတ်ဟာ ဘယ်လိုအနေအထားမျိုးနဲ့ ဘယ်လောက်အထိ ပျံ့လွင့် ပျက်စီးနေမယ်ဆိုတာ အဖြေထုတ်ဖို့ အခက်အခဲ ဖြစ်နိုင်တယ်။
- တိကျပြည့်စုံတဲ့ စာပေဗဟုသုတနဲ့ လက်တွေ့အားထုတ်သူတွေရဲ့ အတွေ့အကြုံတွေကို ထောင့်စေ့အောင် မေးမြန်းဆွေးနွေးပြီး ကိုယ်တိုင် သိကျင့်ကြည့်တဲ့အခါမှာ သီအိုရီနဲ့ လက်တွေ့ကျမှု တစ်ထပ်တည်း ဖြစ်နေတဲ့ အသိစိတ်အစစ်။
- တစ်စုံတစ်ရာကို နှောင့်ယှက်ဖျက်ဆီး ဒုက္ခပေးဖို့၊ အကောက်အကွေ့ ဉာဏ်မှန်သမျှ၊ ဉာဏ်နီဉာဏ်နက်၊ ဉာဏ်ညစ်ပတ်မျိုးစုံ ထုတ်သုံးပြီး အကွက်ဆင် ကြံစည်နေတဲ့ စိတ်အမျိုးအစား။
- ထက်မြက်ပါးနပ်တဲ့ သူတွေဆီမှာရှိတဲ့ ချက်ဆိုနားခွက်က မီးတောက်တဲ့အသိ။ အရိပ်ပြလိုက်တာနဲ့ ဘာအကောင်လဲဆိုတာ ချက်ချင်းသိတဲ့ စိတ်အသိအမျိုးအစား။
- ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့ မြင်ရရင်တောင် တစ်ဝက်ပဲယုံ! ဆိုတဲ့စကားကို လက်ခံထားတဲ့သူတွေဆီမှာ ရှိတတ်တဲ့ စိတ်အမျိုးအစား။ မြင်သမျှ၊ ကြားသမျှကို ချက်ချင်း မယုံတတ်တဲ့သူတွေဟာ ကိုယ်တွေ့အသိဖြစ်အောင် ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့ အကောင်အထည်ဖော် သိကြည့်တဲ့ စိတ်အဆင့်။
- အယူအဆအမှားတွေ၊ မှားယွင်းတဲ့ အမှတ်မှားတွေ လုံးဝငြိတွယ်နေခြင်း မရှိတော့သလို၊ အပွန်းအပဲ့ အပြစ်အနာအဆာတွေ မရှိတော့သလို၊ ဒုက္ခအန္တရာယ်တွေ ထိခတ် တိုက်ခိုက်မှုတွေ မရှိတော့သလို၊ သန့်ရှင်းစင်ကြယ်အောင် ပြုပြင်တည်ဆောက်နေတဲ့ စိတ်အဆင့်။